सुदूरका २८ वर्षीय नगर प्रमुख- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ७, २०७९ डीआर पन्त
डडेलधुरा — चीनबाट वातावरण विज्ञानमा स्नात्तकोत्तर गरेका २८ वर्षीय भरत जोशी वडायर डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका उनी सुदूरमा सबैभन्दा कम उमेरका नगर प्रमुख हुन् ।
भारतसँग सीमा जोडिएको महाकाली किनाराको परशुराम नगरपालिकामा उनले माओवादी केन्द्रका शेरसिंह माललाई पराजित गर्दै नगर प्रमुखमा जित हासिल गरेका हुन् । परशुराम नगरपालिकाको १२ नम्बर वडा लालढुंगाका स्थायी बासिन्दा भरत कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघमा जोडिएका थिए ।
त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दा उनी पहिलो पटक नेविसघको इकाइमा सदस्यको भुमिकाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । त्रिचन्द्र कलेजबाट स्नातक गरेपछि उनले चाइनीज एकेडमी अफ साइन्सेज चीनको राजधानी वेइजिंङबाट वातावरण विज्ञानमा स्नात्तकोत्तर गरेका हुन् ।
६ वर्षअघि कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएर उनले परशुराम नगरपालिकामा राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गरेका थिए । जनताको घरदैलोमा पुगेर सामाजिक जागरण र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन थालेपछि यी युवा एकाएक चर्चामा आएका हुन् । कांग्रेसको पछिल्लो अधिवेशनमा ठूलो मतअन्तरले परशुराम नगर सभापतिमा विजयी भएपछि उनले चुनावको तयारी सुरु गरेका थिए ।
परशुराम नगरपालिकाका निर्वतमान नगर प्रमुख तथा कांग्रेस डडेलधुराका सभापति भिमबहादुर साउंदले कांग्रेसका पुराना नेता हुंॅदाहुंॅदै सम्भावना बोकेका यी युवालाई नगर प्रमुखको टिकटका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
बिहीबार नगर प्रमुखको सपथ लिएपछि कान्छा नगर प्रमुख जोशीले आफ्नो जितले युवाहरुले राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने जन भावनाको कदर गर्दै आफूले काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । वातावरण विज्ञानका क्षेत्रमा राम्रो सम्भावनाका अवसर हॅुंदाहुंॅदै समाज सेवाको कठिन बाटो रोजेकोमा आफ्ना सामु निकै चुनौती रहेको पनि उनले वताए । ‘राजनीतिको वर्तमान शैलीप्रति जनता असन्तुष्ट छन्,’ उनले भने, ‘म आफ्नो नगरपालिकामा युवाहरुले चाहे भने समाजमात्र होइन राजनैतिक शैलीलाई समेत परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिने गरी काम गर्छु ।’
युवा नगर प्रमुख जोशीले भने जस्तो काम गर्न सहज भने उनलाई छैन । उनले नेतृत्व गरेको नगरपालिकामा उपमेयरसहित बहुमत सदस्यमा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन जितेको छ । १२ वडामध्ये वहुमतका साथ ७ वडा माओवादी केन्द्रले निर्वाचन जितेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग ५४० मतले पराजित भएका माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार माल यस पटक जोशीसँग १३७ मतले पराजित भएका छन् । तर, राम्रो गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्रले पनि सहयोग गर्छन् भन्ने विश्वास जोशीले व्यक्त गरेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०८:४९
सहरको बेठेगान कुनाबाट मैजस्ताका कथा सुनाउनेछु । हामी सबै एउटै सहरको बासिन्दा भए पनि सबैका आ–आफ्नै नेपालगन्ज छन् । म मेरो भागको बाइस्कोप देखाउनेछु । म तिनीहरुका किस्सा कहनेछु, जो आजको ५० वर्षपछि स्वयं स्थानीय लोककथाका पात्र भइसक्नेछन् ।
जेष्ठ ७, २०७९ शिवानीसिंह थारु
म हुँ निमको रूख । नेपालगन्जका केही किस्सा मबाहेक अरू कुनै किस्साकारले सुनाउन सक्दैन । किनकि म यस सहरको आदिवासी हुँ । यस सहरमा जति पनि पुराना टोलहरू छन्, त्यहाँ म आज पनि आकाश भएर फैलिएको छु । भलै मेरा हाँगा–बिँगा र शाखा सहरको वैभवमा टाक्सिँदै गएको छ । म काटिँदै–कुटिँदै किनारमा धकेलिएको छु, छाँटिँदै–छेकिँदै ओझेल पारिएको छु । के भनूँ ! आजभोलि सहर मभन्दा जो तीतो भएको छ । तैपनि म छु । बस् रहँदै आएको छु ।
घरको आँगनमा पुजिएदेखि, दिउँसै तर्साउने सनन्नसम्म ! मैले यस सहरको मानसमा जरा गाडेको छु । महिनौं हिँडेर आउने पहाडी हटेरुहरूको विश्राम–छाया बन्नुदेखि, सडक विभागको ठाँडो बनाइनुसम्म ! मैले यस सहरको समय देखेको छु । भइनँ त म दास्तान–ए–नेपालगन्जको किस्सागो !
किस्साको सुरुवात म आफ्नै नामबाट गर्छु ।
सबका लागि म निम हुँ । तर, नेपालगन्जका आमाहरूका लागि म हुँ शीतलादेवी । ती आमा चाहे ८० वर्षकी वृद्धा हुन् या १८ वर्षमै आमा बनेकी किशोरी । सन्तानप्रति आमाहरूको मातृक प्रेमले गर्दा म शीतलादेवी कहलिएको हुँ ।
म त्यो बेलाको कुरा गर्दै छु, जब नेपालगन्जमा स्वास्थ्य सेवा रामभरोसेको भरमा चलेको थियो । हुन त आज पनि रोगको ठीकठीक डायग्नोसिस त कहाँ हुने गरेको छ र ! त्यही भएर डाक्टरका मुखैमा झुन्डेको हुन्छ – बिरामीलाई काठमान्डु लानुस् कि लखनउ !
अहिले त यस्तो छ भने रामभरोसेको पालामा बिरामीहरू काले कम्पाउन्डरको हातमा छाडिएका हुन्थे । हुने–खाने लखनउ जाने भइहाले । बाँकीकाहरू सिकिस्त नभइन्जेल बिहान–दिउँसो काले कम्पाउन्डरकहाँ जान्थे र साँझ–साँझ झारफुकतिर लाग्थे । हो यही बेला नेपालगन्जमा घरभन्दा धेरै निमका रूखहरू हुने गर्थे । किनकि गर्मीजन्य छालाका रोगका निदानका लागि नेपालगन्जियाहरू मेरैमा भर पर्थे ।
वैशाख–जेठमा नेपालगन्ज ४० डिग्री तापक्रमले तप्त हुन्थ्यो । खप्दै आएकाहरूले उम्सिएर–गुम्सिएर खपी नै हाल्थे । असह्य हुन्थ्यो त केटाकेटीहरूलाई । टाउकोभरि खटिरा, हातखुट्टाका कापकापमा पाक्ने घाउ, ढाड र छातीभरि चिलचिलाउने घमौरा । तीनलाई भतभती पोल्थ्यो । केटाकेटीको सास्ती देखेर आमाहरू छटपटिन्थे । त्यसपछि आमाहरू मेरो शरणमा आउँथे । तिनले मेरो जराका माटो खोस्रेर लान्थे । त्यसको लेप बनाएर बच्चाका शरीर लिप्थे । मेरा हाँगा टिपेर दिनैभरि बच्चालाई हम्काइरहन्थे । र, बिहान–बिहान आमाहरू मौनब्रत लिई पछाडि पनि नफर्की मेरो जरामा पानी हाल्न आउँथे । एक हप्ता यही रीत दोहोर्‍याइरहँदा बच्चाको घाउ–खटिरा सुक्दै आउँथ्यो । साथै भित्री जलन कम हुँदै शीतल पनि हुन्थ्यो । यसरी खटिराको पोलाइबाट त्राण पाइने भएर हो यहाँका आमाहरूले मलाई शीतलादेवीको रूपमा मान्न थाले ।
आज पनि आमाहरू बडो श्रद्धाका साथ मलाई शीतलादेवी भनी पुकार्छन् । मेरो जरामा जल चढाएर मलाई सिञ्चिराख्छन् ।
हामीलाई रोपिराख्नु पर्दैन । कागहरू हाम्रा निमकौडी आफ्नो टुप्पामा टिपेर यत्रतत्र गरिबस्छन् । बस् हामीलाई उम्रिनुमा बेर । त्यही भएर यस उष्ण प्रदेशमा हामी सदादेखि रहँदै आएका छौं । यो ठाउँ जब मानव बस्तीले आबाद भयो, हामी पनि आफ्नो व्यक्तित्वसहित चिनियौं । अझ खास भयौं भनुम् न ! गर्मी देशका बासिन्दालाई हाम्रो कुन अंग काम लाग्दैन र ! दाँतको कीरा मार्नुदेखि गहुँलाई घुनबाट बचाउन हाम्रो डाँठ, तीतो पात र निमकौडी सबै काम लाग्छ । त्यही भएर उहिले–उहिले हुने–खाने बनियाँका घरमा एउटा कुवा र एउटा निमको रूख हुनैपर्थ्यो । गतिलो डाक्टरी सेवा नभएको ठाउँमा हामी निमका रूख वैद्यजस्ता थियौं ।
टोलका नक्सामा हामी माइलस्तम्भझैँ ठाउँ चिनाउन काम लाग्थ्यौं । तर, अहिले हामी आफैँ आफ्नो चिनारी खोजिरहेका छौं । आज सबै आदिवासीका कथा यस्तै होइन र ? किन बिर्सिन्छन् आजका महामानव, रोबोटीय मानव सभ्यतालाई आफ्नो जरासित जोड्ने कडी हामी आदिवासी नै हौं ? तर, हामी काटिएका छौं, रोड चौडा बनाउन । हामी च्यापिएका छौं, चारैतिर बजार विस्तार गर्न । हामी थिचिएका छौं, भवनैभवन एकअर्कामा खापिन । हामी बेवास्ता गरिएका छौं, विस्मृत बनाइन । हामी बिर्सिइदै छौं, फेरीफेरी उम्रिन नदिन । तर, के सहर समृद्ध हुने यही एउटा मोडल हो ? नेपालगन्जजस्तो सहरले त झन् खोइ बुझेको ? यहाँको उक्लिराखेको तापक्रमको राप हामीजस्ता रूखहरूले नै कम गर्ने हुन् ।
अफसोस ! यो सत्य आत्मसात् नगरुन्जेल रूखहरू सक्किँदै जानेछन् । हामी केवल बूढा–पुरानाका स्मृतिमा रहिरहने छौं । ती रिमरिम स्मृति, जसद्वारा मान्छेको बितेको समय वर्तमानको छाया बनेर हिँडिरहेको हुन्छ । त्यसैले सहरमा बुढिँदै गएको मान्छे एकै पटक दुइटा सहरमा बाँचेको हुन्छ । एउटा वास्तविक सहर, जसको स्वरूप दिनदिनै फेरिँदै गएको हुन्छ । अर्को बाल्यकालको सहर, जहाँ ऊ बेफिक्री हुर्केर बढेको हुन्छ । स्वरूप फेरिँदै गएको सहरलाई हेरेर ऊ टोलाउँछ । टोलाउँदै ऊ बाल्यकालको सहरलाई खोजिरहेको हुन्छ । किशोरावस्थाका मस्तीहरू सम्झेर उही टोलको भिन्नै नक्सा कोरिरहेको हुन्छ । आज तिनै टोलेहरू छन्, जो काटिएको निमको रूख टुलटुलु खोजी बसेका छन् ।
बाँकी बचेका निमका रूख अब नेपालगन्जका पुराना चोक र गल्लीमा साँघुरिएका छन् । हामी मेनरोडबाट ठ्याक्कै देखिदैनौं । तर, अचम्म के छ भने हामीलाई खोज्दै केटाकेटीहरू आइपुग्छन् । धेरै पुराना–पुराना रूख, जो काटिइएका छैनौं (यतिन्जेल !), हाम्रा वरिपरि केही खुला ठाउँ छ । सहरभित्र खेल्ने ठाउँको अभावमा बच्चाहरू हाम्रै छाया तल बटुलिन्छन् । सहरमा अब ती बच्चाहरू नै छन्, जो हाम्रो ठेगाना प्रेमपूर्वक बताइदिने गर्छन् ।
सहरको त्यही बेठेगान कुनाबाट म मैजस्ताका कथा सुनाउनेछु । आकाश मिचेर बनाइएको भवनको चेपबाट म अदृश्य देखिनेहरूको धुकधुकी सुनाउनेछु । पछाडिका गल्लीबाट सहरजस्तो देखिन्छ त्यसकै हाल बयान गर्नेछु । उसो त आफ्नो भोगाइअनुसार, सबैका पृथक्–पृथक् कथा हुन्छन् । किनभने हामी सबै एउटै सहरको बासिन्दा भए पनि सबैका आ–आफ्नै नेपालगन्ज छन् । म मेरो भागको बाइस्कोप देखाउनेछु । म तिनीहरूका किस्सा कहनेछु, जो आजका पचास वर्षपछि स्वयं स्थानीय लोककथाका पात्र भइसक्नेछन् ।
पानका पारखीहरू भन्ने गर्छन्– ‘सियारामको पान नेपाल अधिराज्यमा वर्ल्ड फेमस छ !’
उसको पानको ख्याति नेपाल अधिराज्यभरि होस् या नहोस्, तर सियारामको कथा साँच्चिकै ‘वर्ल्ड फेमस’ हुनलायकको छ ।
सियारामले पान मात्र बेच्दैन पानको पातमा प्रेमको गुलकन्द लगाएर सौहार्द बाँड्छ । यो सौहार्द पसले र ग्राहकबीचको मामुली सौहार्द मात्र होइन । यो दुई धर्म मान्ने समुदायको एकअर्काप्रतिको सहिष्णुता पनि हो । र, यो सहिष्णुता नेपालगन्जमा हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि झनै चाहिने भएको छ ।
त्यस दिन ऊकहाँ आउने मुस्लिम ग्राहकहरू यसै सोधिदिने गर्छन् । ‘आज मंगल ?’ सियाराम मुसुक्क मुस्काएर टाउको हल्लाइदिने गर्छ । जसरी मुस्लिमहरूलाई हनुमान्चालिसा सुन्दै पानको बिडा चपाउन कुनै आपत्ति छैन, त्यस्तै सियारामलाई मस्जिदबाट आउने अजानको ‘अल्लाह–हु–अकबर’ सुन्दै पसलको तालिका मिलाउन कुनै आपत्ति छैन ।
सियारामको पानमा के खासियत छ ? भनेर हिन्दु ग्राहकलाई सोध्दा उनीहरू भन्छन्, सियारामले पान बडा सफाइले बनाउँछ । उसलाई सोध्दा ऊ गर्वले स्विकार्छ । भन्छ, ऊ बिहान नुहाइधुवाइ गरेर मात्र पानलाई हात लगाउँछ रे ! पानको पातलाई एक–एक गरेर दुई–तीन पानीले धुन्छ रे ! किनेको सुपारीबाट एक–एक कपाल बिनेर, सफाइ गरीवरी मात्रै पसलको घर्रामा राख्छ रे ! नरिवललाई पनि देशी घिउमा भुट्छ रे ! अनि हरेक ग्राहकपिच्छे ऊ पान लगाउने काउन्टर पुछ्ने गर्छ रे !
कोरोनाकालमा पनि त्यस्तै भयो । त्यतिबेला एउटा मुस्लिम परिवार कोरोनाले संक्रमित हुँदा पूरै समुदायलाई नै छिःछिः दूरदूर गरिएको थियो । शङ्का, त्रास, खासखुसले वातावरण तनावमय थियो । त्यतिबेला पनि सियारामको पानको गुम्टी बन्द थियो । तर, पानको तलतल लाग्ने ग्राहकहरू उसको घरमै पुग्ने गर्थे । धेरैजसो त मुस्लिम ग्राहकहरू नै थिए । त्यो देखेर टोलको कसैले गस्तीको पुलिस बोलाइदियो । पुलिसहरू आएर सियारामलाई केरकार गरे । सफाइमा उसले भन्यो, ‘सर म कसरी हिन्दु र मुसलमानबीच छुट्याएर दिऊँ ?’ लठ्ठी लिएर आएका पुलिसको मनमा खै के पर्‍यो । उनीहरूले कुनै कारबाही नगरी उसको ढोकाअगाडि एउटा डोरी बाँधिदिए । त्यसपछि भौतिक दूरी कायम गरी पान बेच्ने सल्लाह दिए । जाँदा पन्जा र स्यानिटाइजर पनि छाडेर गए ।
मान्छेहरू भन्छन्– देशलाई जोड्न राजा चाहिन्छ रे ! सहरलाई जोड्न जक्सनमा सालिक चाहिन्छ रे ! म त भन्छु– समुदाय, सहर र देश जोड्न सियारामहरू चाहिन्छ । भावी पुस्तालाई सुनाउन सियारामहरूका कथा चाहिन्छ ।
म भन्न सक्दिनँ यो सहरमा पट्टे बाबु पाल्ने सोख कसरी सुरु भयो ? किन सुरु भयो ? कसले सुरु गर्‍यो ? तर, यो सहरलाई यदि कथैकथाको गन्ज मान्ने हो भने पट्टे बाबुले ती किस्सामा गीत भर्ने काम गर्छन् । किनकि सहरको रौनकको कथा यहाँका घमन्जादेखि राबडीसम्मले बताउन सक्छन् । तर, सहरमा हुने एक्लोपनको कथा केवल पट्टे बाबुले नै सुनाउन सक्छन् ।
पट्टे बाबु अर्थात् सुगा । मधेसीहरूले प्रेमले मिठ्ठु बोलाउँछन् । पहाडीहरूले पट्टे बाबु । सम्मान दिएर बोलाउँदा उनी शुकदेव भइजान्छन् । यो सहरको गल्ली भित्रभित्र छिचोल्दै जानुभयो भने तपाईले देख्नुहुन्छ, प्रायले यहाँ सुगा पालेको । बेलायतीहरू कुकुरको सोखिन भएजस्तै, जापानीहरूले बिरालो मन पराएजस्तै नेपालगन्जियाहरू सुगाका सोखिन हुन् । सुगा पनि जुनै खाले होइन– करारा सुगा । घाँटीमा रातो घेरा भएको र कण्ठमा कालो घेरा बसेको, जसलाई कण्ठ लागेको सुगा पनि भन्छन्, जो मान्छेको बोली नक्कल गरेर ट्याइँट्याइँ बोल्छन् ।
यहाँ सुगा बिक्री हुने गरेकाले चिडीमारहरू भारतबाट तोता लिएर आउँछन् । तर, पारखीहरू मैदानी भूभागका तोता होइन, पहाडी भेगका सुगा मन पराउँछन् । नेपालगन्जमा करारा सुगा धेरैजसो माथि सुर्खेतबाट ल्याइन्छ । सुर्खेतका सुगा पन्ध्र सयदेखि दुई हजारसम्म पर्छ । यसको दाँजोमा भारतीय तोता सय रुपैयाँ मात्र पर्छ । भए पनि सुगाका सोखिनहरू महँगो पहाडी सुगा नै रोज्छन् ।
ती सुगाहरू ट्याइँट्याइँ बोल्ने मात्र होइन, तिनका आनीबानी पनि बडो नटखट हुने गर्छ । पाल्नेको घरको माहोल र मालिकको व्यवहारअनुसार सुगाको व्यक्तित्व पनि त्यसै प्रकारको हुन्छ । तिनका बारे सुगा मालिकहरूलाई सोध्नुपर्छ । प्रसन्नचित्त भएर ती सुनाउन थाल्छन् । कोही भन्छन्– तिनको पट्टे बाबु बिहानबिहानै ‘सीताराम सीताराम’ भनेर ब्युँझाउने गर्छन् अरे !
कोही भन्छन्– तिनको मिठ्ठु घरमा कसैलाई नदेख्दा ‘बप्पा बप्पा’ भन्दै बोलाउँछन् अरे !
कसैका पट्टे बाबु घरमा नयाँ मान्छे देखेकी ‘को होय, को होय ?’ भनी सोध्छन् अरे !
एउटाको मिठ्ठुले त भान्छामा खाना पाक्यो कि ‘मिठ्ठु खाना खायो, मिठ्ठु खाना खायो’ भन्दै पिँजडाको कचौरा बजाउन थाल्छन् अरे !
अर्कोको पट्टे बाबु पिँजडाअघि दुई जना कुरा गरेको देखे कि ‘भक् भक्’ भनी भगाउन थाल्छन् अरे !
कुनै पट्टे बाबु त टेढिएका हुन्छन् । सडकछेउ घर हुनेले दिनभरि पट्टे बाबुलाई घरअगाडि झुन्ड्याइदिएका हुन्छन् । आउने–जाने केटाहरू पट्टे बाबुलाई जिस्क्याएर गइदिन्छन् । दिनभरिको उल्ल्याइँले तिनी रिसले चुर भइसकेका हुन्छन् । अनि आफ्नो मालिकलाई देख्नेबित्तिकै तिनै केटाहरूले झैँ ‘क्या बे, क्या बे’ भन्दै बेहोरा देखाउँछन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ! कहिले कहिले त रिसले मालिकको औंला पनि टोकिदिन्छन् ।
यसरी पट्टे बाबुका रमाइला आनीबानी उनीहरू प्रेमले सुनाउने गर्छन् । सुनाउँदा सुनाउँदै थाहै नपाई उनीहरू आफ्नो एक्लोपनको कथा पनि सुनाइरहेका हुन्छन् । कुरैकुरामा उनीहरूबाट थाहा हुन्छ, सुगा पालेको कारण । कसैको पत्नी वा पति मरिसकेका हुन्छन् । बोलिरहने साथी नपाएर उनीहरूले सुगा पालेका हुँदा रहेछन् । कसैको सन्तान नभएर पालेका हुन्छन् । मिठ्ठुको नटखटपनमा उनीहरू बच्चाको कमी पूरा गरिराखेका हुँदा रहेछन् । कसैको परिवार भरिपूर्ण भएर पनि आफूलाई एक्लो महसुस गर्ने हुन्छन् । खालीपन काटिरहेझैँ उनीहरू भन्छन्, गर्मीको लामो दिन कटाउन सुगा पालेको । कोहीकोहीलाई चाहिँ पाल्नुको कारण सोध्दा, अर्थपूर्ण मौनता साधेर ‘त्यसै’ भनिदिन्छन् ।
तर, सबै जनाले अन्त्यमा एउटै कुरा भन्छन्, ‘यो पट्टुको ज्यादै माया लाग्छ ।’
मेरो मनमा आउँछ– साँच्चै मायै हो त ?
मलाई लाग्छ, ज–जसले पिँजडामा सुगा पालिराखेका छन्, ती असलमा सुगाका मालिक हुन् । सुगाका प्रेमी होइनन् । सुगाप्रेमी त तिनीहरू त्यतिबेला हुन्छन्, जब उनीहरूको सुगा मर्छन् वा उडेर जान्छन् । छैन त विरोधाभास ! नपत्याए पूर्व सुगा मालिकहरूलाई सोध्नुस् । अब अर्को सुगा पाल्ने कि नपाल्ने ? जवाफ नसोचिएको आउँछ । साँच्चै भन्दै छु । छ जना भूतपूर्व सुगा मालिकहरूमध्ये कम्तीमा चार जनाको हृदय परिवर्तन भएकै हुन्छ । धेरै वर्ष पालेका सुगा जब मर्छन् बल्ल सुगालाई प्रेम गर्नुको अर्थ उनीहरूले बुझ्छन् । आफूलाई छोडेर कहिले नजाला भनेको सुगा जब उडेर जान्छन् बल्ल पन्छी हुनुको मर्म उनीहरूलाई बिझ्छ ।
जजसका सुगा मरेर जान्छन्, उनीहरूले शरीरलाई पीताम्बरले बेरिदिन्छन् । खाली जग्गा खोजेर खुला आकाशमुनि दफनाइदिन्छन् । आहत हुँदै आत्मग्लानिमा दुवै हात जोड्छन् । प्रार्थना गर्दै उनीहरू कसम खान्छन् – ‘अबदेखि पट्टु पाल्दिन । कुनै चरालाई पिँजडामा राख्दिन ।’ यति वर्ष पिँजडामा राखेकामा आफ्नो पट्टुसित माफी माग्छन् । र, भोलिपल्टदेखि घरको छतमा भँगेरालाई पानी र कनिका राखिदिन्छन् । जजसका सुगा उडेर जान्छन्, उनीहरू एकदमै उदास हुन्छन् । छेउछाउका रूख बिरुवा हेर्दै आफ्नो सुगालाई खोजिरहन्छन् । रूखका हरिया डाली हल्लिँदा उनीहरू कल्पिन्छन्– यस्तो गर्मीमा पट्टे बाबु कहाँ होलान् ? उँचो उडान भर्न बिर्सिएको आफ्नो सुगालाई सम्झिँदै डर मान्छन्– कसले लग्यो होला ? वा कुनै जब्बर कौवाले ठुँगीठुँगी मारिदियो कि ? उनीहरूको मन कचोट्छ । आकाशतिर हेर्दै उनीहरू पनि कसम खान्छन्– अबदेखि पट्टु कहिल्यै नपाल्ने । पिँजडामा कुनै चरालाई कैद नगर्ने ।
यसरी उनीहरू सुगाका मालिकबाट सुगाका प्रेमीमा रूपान्तरित हुन्छन् । पन्छीको आजादी बोध गर्ने वास्तविक पन्छीप्रेमी हुन्छन् । आखिर कसैसित मोहित हुनु र कसैलाई प्रेम गर्नुमा फरक त छ नि ।
नेपालगन्जका ठेट अवधीभाषीमा एउटा चलन छ । आफ्ना आत्मीयसित बिदा हुँदा ‘जाइथेन’ अर्थात् जान्छु नभन्ने । त्यसको सट्टामा ‘लौट्के आइथेन’ भन्ने । अर्थात् फर्केर आउँछु ।
त हाजिरिन ! दास्तान–ए–नेपालगन्जको कथान्तमा ‘लौट्के आइथेन’ भन्नुअघि एउटा गुह्य कुरा भनूँ ।
यस सहरमा मभन्दा पनि पुराना रूखहरू छन् । उसो त हाम्रो आयु पनि २०० वर्षसम्म हुन्छ । तर, सहरमा ठडिन दिए पो ! खैर सहरको पितामह भन्नलायकको रूख रानीतलाउ अगाडिको बाबा कुटीमा छन् । ती वरको रूख कम्तीमा सय साल पुराना हुन् । कुटीमा बस्ने चौरासी वर्षकी वृद्धा भन्छिन्, उनी बाह्र वर्षमा बिहा गरेर ल्याइँदा ती वर त्यस्तै अजंगका थिए अरे । अर्को छन् पाकडको रूख । ती चौलिक्का बाबाको मजारअघि झ्याम्म परेर फैलिएका छन् । कोही भन्छन्, त्यो रूखलाई स्वयं चौलिक्का बाबाले लगाएका हुन् अरे । कोही भन्छन् ती आफ से आफ उम्रिएका रे । जसले जे भने पनि सबैले प्रेमले बोलाउँदा तिनी ‘पकडिया’ भइजान्छन् ।
अर्को पाकडको रूख भगवान् तलौवामा छन्, जहाँ पहिले यौन व्यवसाय हुनेगर्थ्यो । तर, आज न त्यहाँ तलौवा (पोखरी) छ, न त्यहाँ यौनकर्मीहरू बस्ने गर्छन् । बस् त्यहाँ मन्दिर छ र मन्दिरछेउ पाकडको रूख, जो चुपचाप त्यस गल्लीको इतिहास आफूमा समेटेर उभिएका छन् । बागेश्वरी मन्दिर झर्ने खुड्किलोको बायाँपट्टि मिठाई बेच्ने पसल याद गर्नुभएको छ ? त्यो पसलभित्र एउटा पीपलको रूख छ । त्यो यति बडेमाको छ, त्यसलाई काटेर भवन बनाउने आँट त्यहाँको जग्गाधनीमा भएन । त्यसैले तिनले रूखलाई घरको बीचोबीच पारेर भवन बनाए । आज त्यो पीपल भवनसँगसँगै तीन तलासम्म ठडिएको छ । त्यसको टुप्पो चौथो तलाको छतबाट निस्केर चारैतिर झ्याम्मिएको छ । त्यति मात्र हो र ! पीपलको जरा तीन किलोमिटर वरिपरिका घरसम्म फैलिएको छ । हरेक घरमा त्यसको जरा कहीँ न कहीँबाट टुस्स निस्किरहेकै हुन्छ । तैपनि मान्छेहरूमा कुनै गुनासो छैन । उनीहरू भन्छन्, यी हाम्रा बाजेका पालादेखिका शनिश्चर बाबा हुन् ।
अब अरू कुनकुन रूखका बारेमा बताऊँ ? बुलबुलिया श्मशानघाटको सिमलको रूखबारे भनौं कि ? गगनगन्जको पीपलमाथि चढेको निमको रूखबारे चर्चा गरौं ? यस्ता वर, पाकड, पीपल, कदम र निमका रूखहरू सहर सँगसँगै हुर्के–बढेका छन् । यी रूखमा सहरवासीका यादहरू बुनिएका छन् । त्यसैले यी रूखहरू सहरका स्मृति हुन् । यिनमा सहरवासीका जीवनी सुरक्षित छन् ।
पुराना रूख काटिनु भनेको सहरको साझा स्मृति हराउनु हो । यी स्मृतिलाई बचाएर राखिएन भने सहरलाई विस्मरण हुन सक्छ । स्मरणघात ‘डिमेन्सिया’ हुन सक्छ । सहरको साझा स्मृतिबिना नेपालगन्जका मान्छे कुनै पनि गन्जका बासिन्दा हुन सक्छन् । बोर्डरपारिको बाबागन्जका हुन सक्छन् । पूर्वी नेपालको वीरगन्जका हुन सक्छन् । वा हिन्दी उपन्यास ‘राग दरबारी’ को काल्पनिक सहर शिवपालगन्जका पनि हुन सक्छन् । त्यसैले आफ्नो स्मृतिलाई बचाएर राख्ने जिम्मेवारी अब तपाईंको ।
के गर्नु ! आफू त ढुक्कले यो पनि भन्न पाउँदिनँ– ‘लौट्के आइथेन... !’
प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०८:३४